Pịkụl jikọtara ọnụ
Punch ngwakọta bụ igwe npịpị, na nchikota nchikota na -arụ ọrụ dị oke mkpa na mmepụta. Usoro ntụmadị nke ntụmadị nwere ike ịchekwa ihe ma rụọ ọrụ nke ọma karịa igwe ọdịnala. Ojiji nchikota ntụpọ na -agbasawanye na -agbasawanye, n'ihi na ọrụ igwe na -akụ ọkpọ anaghị achọ ihe nrụpụta dị elu maka onye ọrụ. Nchikota ntụmadị nwere ike ime akụkụ oghere, ịkụ aka, ịkpụ na ịpụpụta akụkụ. Enwekwara ike ijikọ igwe ntụpọ jikọtara ya na onye na-enye akwụkwọ nri akpaka kwekọrọ na nchọpụta njehie nri, ịbecha ụzọ na tupu agbaji ngwaọrụ. Igwe nchikota ọhụrụ a nwere ike ghọta nrụpụta akpaka dị ọnụ ala yana arụmọrụ dị elu.
Ejiri ya maka ịpị ọnụ ụzọ / okpokoro ụzọ, archway nwere onwe nwere ike ịhazigharị aka ekpe na aka nri dị ka mkpa si dị
Ntanetị ing ịnọdụ → ịkụ ọkpọ → blanking
Ike injin isi 7.5KW
Ihe eji eme ihe Ọrụ punching nke oghere niile na nkuku nke ọnụ ụzọ mbata na nke ime na okpokoro ụzọ
Akụkụ mpụta 3000*900*2000
Nha okpokoro Dị ka ịnwụ nha
Ebumnuche bụ isi: ọrụ ntụpu nke oghere niile na nkuku nke ọnụ ụzọ mbata na mpụga na okpokoro ụzọ
Ngwa igwe modulu n'ozuzu na-anabata ọtụtụ axis, ọtụtụ ngwaọrụ, ọtụtụ usoro, ọtụtụ ihu ma ọ bụ nhazi ọtụtụ ebe n'otu oge, na nrụpụta nrụpụta dị ọtụtụ ruo ọtụtụ iri ugboro dị elu karịa nke ngwa igwe nwere ebumnuche.
Ebe ọ bụ na etinyerela ihe ndị mejupụtara ya na usoro ha, enwere ike ịhazi ha nke ọma dịka mkpa si dị, nke nwere ike belata imewe na usoro nrụpụta. Ya mere, nchikota nchikota nwere uru dị ọnụ ala yana arụmọrụ dị elu, a na -eji ya eme ihe n'ọtụtụ na imepụta oke, enwere ike iji ya mepụta ahịrị mmepụta akpaka.
Nke gara aga: Hydraulic flanging igwe
Osote: Igwe nrapado ọkụ
Punch jikọtara ọtụtụ ihe
Njikwa ọnụọgụ Kaiping igwe ọgbakọ ahịrị